Afghanistana: Antsafa niarahana tamin’i Baktash Siawash, bilaogera sady mpanao gazety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Desambra 2018 8:31 GMT
Vakio amin'ny teny فارسی, Deutsch, 繁體中文, 简体中文, English
Antsafa momba ny sivana, ny fampitam-baovao ary ny bilaogy ao Afghanistana miaraka amin'ilay bilaogera sady mpanao gazety Baktash Siawash ity manaraka ity. Nanoratra ho an'ny gazetiboky maro i Baktash anisan'izany ny WashingtonPrism.
F: Mba ampahafantaro anay ny momba anao sy ny bilaoginao.
V: Baktash Siawash no anarako ary mipetraka any Afghanistana aho; Ny anaran'ny bilaogiko dia “Asa soratr'i Siawash” (Neweshtehayeh Siawash amin'ny teny Farsi). Nanomboka ny bilaogiko aho tamin'ny taona 2003 tany Kabul. Namoaka ny asa soratro aho tamin'ny alàlan'ny mpanome tolotra Persianblog, fa taorian'ny namoahana lahatsoratra momba ny “Voaly Ratsy (Hijad Ratsy) tao Tehran”, dia nesorina tao amin'ity mpanome tolotra ao Iran ity ny bilaogiko . Nanana bilaogy vaovao aho taorian'izay : http://www.kabul.tchatcheblog.com/.
F: Ahoana no fomba fijerinao ny toeran'ny bilaogy Afghana amin'izao fotoana izao (2007)?
V: Nanomboka ny fanoratana bilaogy tao Afghanistana tamin'ny taona 2002, ary olona vitsivitsy ihany izay afaka niditra tamin'ny aterineto tany amin'ny toeram-piasany ireo bilaogera. Izany hoe miara-miasa amin'ny ONG, ONU na orinasa vahiny hafa ao Afghanistana ny ankamaroan'ireo bilaogera ireo. Natsangan'ny Afghana monina any Kanada, Etazonia sy ny faritra hafa maneran-tany ihany koa ny bilaogy Afghana sasany .
Tamin'ny taona 2004, nitombo nanodidina ny bilaogy miisa 300 ny isan'ireo bilaogera Afghana. Nampiseho ny antontan'isa tamin'ny taona 2005 fa niakatra hatramin'ny 900 teo ho eo ny isan'ny bilaogy Afghana. Toa manana bilaogera miisa 3000 isika amin'izao fotoana izao (2007) saingy tsy manavao ny bilaoginy ao anatin'ny iray volana ny ankamaroan'izy ireo. Vitsy amin'izy ireo no mavitrika sy manavao ny bilaoginy, isan'andro, isan-kerinandro, ary isam-bolana. Miresaka momba ny tononkalo, politika ary kolontsaina ny ankamaroan'ny bilaogy Afghana.
F: Toa nankafy ny fahalalahana maneho hevitra i Afghanistana ary maro ny gazety. Mihevitra ve ianao fa mety hampisy tombony fanampiny ho an'ny fahalalaham-pitenenana ny bilaogy? Manao ahoana ny anjara toeran'izy ireo hatramin'izao?
V: Ao Afghanistana, misy onjam-peo miisa 70, ary gazetiboky miisa 400 mivoaka isan'andro, isan-kerinandro ary isam-bolana, masoivohom-baovao miisa 5, fahitalavitra miisa 7, saingy mbola tsy manana fahalalahana maneho hevitra izahay. Ny governemanta Afghana dia tsy manaiky ireo gazety sy mpanao gazety mpitsikera any Afghanistana. Maro ny ohatra azoko ambara. Narmgo, mpanao gazety Afghana mahaleotena iray nalefa tany am-ponja noho ny fitsikerany ny Minisitra Afghana. Manara-maso ireo bilaogy Afghana ny governemanta Afghana ary 2 andro talohan'io dia nogadrain'ny sampam-pitsikilovan'ny polisy Afghana manokana NDS nandritra ny andro vitsivitsy ilay bilaogera Afghana sady mpanao gazety Kamran Merhazar. Satria nitsikera ny governemanta ihany koa izy.
Mampiseho ireo ohatra ireo fa mihamitombo ny tsindry atao amin'ny bilaogy sy ny sampana hafa amin'ny fampitam-baovao ary lasa sarotra kokoa ny miasa amin'ny gazety, gazetiboky ary bilaogy any Afghanistana.
F: Ahoana ny fifandraisan'ny fampahalalam-baovao nentim-paharazana sy ny bilaogy any Afghanistana? Maro ve ny mpanao gazety mibilaogy sa tsia?
V: Heveriko fa hevi-baovao ao Afghanistana ny bilaogy. Eto izahay dia manana gazety sy gazety mivoaka isan-kerinandro maromaro izay manana bilaogy sy tranonkala, fa amin'ny ankapobeny dia mbola eo amin'ny fahazazany eto ny miara-miasa amin'ny bilaogy. Tsy afaka mampiasa mailaka akory aza ny ankamaroan'ny mpanao politika Afghana, mpanao gazety ary mpanoratra. Olana iray hafa ato amin'ity faritra ity ny herinaratra. Kabul no renivohitr'i Afghanistana saingy mbola mijaly noho ny fahatapahan-jiro matetika ny olom-pireneny. Ankoatra izany, mampiasa vaovao avy amin'ny tranonkala ny ankamaroan'ny gazety Afghana mivoaka isan'andro, isan-kerinandro sy isam-bolana. Mitranga indrindra matetika amin'ny BBC Persiana izany : Maro ny famerenana famoaham-baovao kanefa tsy milaza ny loharanom-baovao. Ao Afghanistana, tsy misy olona manome lanja ny zon'ny fizakamanana.
F: Misy hevitra tianao zaraina amin'ny mpamaky Global Voices ve ?
V: Fantatro fa mpanao gazety, mpikatroka ny zon'olombelona ary mpiaro ny fahalalaham-pitenenana ny ankamaroan'ny mpamaky Global Voices. Miangavy azy ireo aho tsy hamela ireo mpanao gazety Afghana sy ny mpitolona ho an'ny fahalalahana maneho hevitra hiady irery.